Ukufaka isicelo sokukhulisa umntwana ongengowakho odinga inkathalo nokhuselo | South African Government
Ukufaka isicelo sokukhulisa umntwana ongengowakho odinga inkathalo nokhuselo
Malunga ukufaka isicelo sokukhulisa umntwana ongengowakho odinga inkathalo nokhuselo
Ukuba ufuna ukukhulisa umntwana odinga inkathalo kunye nokhuselo, faka isicelo sokukhulisa loo mntwana kwi-ofisi yeSebe loPhuhliso lwezeNtlalo okanye kumbutho ogunyazisiweyo wokukhusela abantwana.
Ukukhulisa umntwana ongengowakho odinga inkathalo nokhuselo kukubekwa komntwana okwethutyana odinga inkathalo kunye nokhuselo phantsi kolawulo lwakho. Umntwana ubekwa kwinkathalo yomntu ofanelekileyo ongenguye umzali wakhe.
Ngubani onelungelo lokuba ngumntwana okhuliswa kuba edinga inkathalo kunye nokhuseleko?
abe ngaphantsi kweminyaka eli-18 kwaye/okanye
abe ebelahliwe okanye uyinkedama kwaye akanalo naluphi na uhlobo lwenkxaso alufumanayo
ubonakalisa ukuziphatha abazali okanye abamkhathalelayo abangakwaziyo ukukulawula
abe uhlala ezitalatweni okanye uyangqiba ukuze aphile
uzinikele ekuxhomekekeni kwisidodobalisi ngqondo kwaye akanayo nayiphi na inkxaso yokuba afumane unyango loko kuxhomekeka
uxhatshaziwe okanye uvuleleke kuxhatshazo
usemngciphekweni ukuba angabuyiselwa kubazali bakhe okanye abo bamkhathalelayo
ukwimeko yokungahoyeki ngokwasemzimbeni okanye engqondweni, akaphethwanga kakuhle, uyaxhatshazwa ngumzali, ngulowo umkhathalelayo, ngumntu onoxanduva nelungelo lokuba ngumzali okanye ilungu losapho lomntwana okanye ngumntu umntwana lowo aphantsi kolawulo lwakhe.
Ngubani onelungelo lokukhulisa umntwana odinga inkathalo kunye nokhuselo?
Ukuze ukulungele ukuba ngumntu okhulisa umntwana odinga inkathalo nokhuselo, kufuneka:
ube neminyaka eli-18 okanye ngaphezulu
uphile qete kwaye ufaneleke
ube uyakuthakazelela kwaye uyakwazi ukumxhasa umntwana
ube uyakwazi ukwenza okumngqongileyo kube yindawo elungele ukukhula nokuphuhla komntwana
Ungakwazi ukukhulisa umntwana odinga inkathalo nokhuselo kangangexesha elimiswe yinkundla. Kanye nje ukuba liphele ixesha elimiswe yinkundla, igosa elongameleyo, emva kokuphonononga ingxelo nokuthethelelwa lingakwazi ukulandisa ixesha lomyalelo wenkundla.
Faka isicelo sokukhulisa umntwana odinga inkathalo nokhuselo kwi-ofisi yeSebe loPhuhliso lwezeNtlalo okanye kumbutho ogunyazisiweyo wokhuselo lwabantwana.
Uya kuthunyelwa kunontlalontle oya kuqhuba uphando.
Unontlalontle uya kuhlola iimeko zomntwana.
Nawe uya kuhlolwa kwaye kukhangelwe ukuba ukulungele na ukuba ngumzali womntwana odinga inkathalo nokhuselo.
Faka ezi zilandelayo:
isifungo esichaza ukuba umntwana ulahliwe (ukuba sikhona)
iziqinisekiso zokufa kwabazali (ukuba zikhona)
isiqinisekiso sokuzalwa somntwana (ukuba sikhona) – Ukuba umntwana akanaso isiqinisekiso sokuzalwa, unontlalontle uya kukuncedisa ukuba usifumane
Abazali abamzeleyo umntwana kunye nomntwana kufuneka babandakanywe kule nkqubo.
Kwiimeko apho umntwana elahliwe okanye eyinkedama, unontlalontle uya kukuncedisa ukufaka intengiso kumaphephandaba nize nilinde impendulo evela kuluntu kangangenyanga enye.
Unontlalontle uya kuqulunqa ingxelo ethethelelayo aze ayithi thaca kwiNkundla yabaNtwana.
Ngokusekwe kwingxelo kanontlalontle, igosa elongameleyo enkundleni lingafumanisa ukuba umntwana udinga inkathalo nokhuselo.
Igosa elongameleyo liya kukhupha umyalelo wenkundla ovumela ukubekwa komntwana kumzali oza kumkhulisa ngenkathalo nokhuselo. Umyalelo wenkundla uya kubonisa amagama abazali, elomntwana oza kukhuliswa kunye nexesha aza kuhlala lona.
Qaphela: Kanye ukuba umyalelo wenkundla ukhutshwe, ungafaka isicelo sokukhulisa umntwana odinga inkathalo nokhuselo kwi-ofisi yeSASSA. Umntwana angakhululwa ekuhlawuleni imali yesikolo nakumaziko oluntu ezempilo. Ukuze umntwana akhululwe ekuhlawuleni imali yesikolo, kufuneka uzalise uXwebhu lokuKhululwa olufumaneka esikolweni uze ufake nekopi yomyalelo wenkundla.
Uphando kunye nokuqosheliswa kwemibuzo kuyohluka kwimeko nganye.
Onke amaxwebhu ayafumaneka kwi-ofisi yeSebe loPhuhliso loLuntu ekufutshane nawe.
Department of Social Development provincial offices contact list (Uluhlu lokuqhagamshelana nee-ofisi zephondo zeSebe loPhuhliso lwezeNtlalo)
Isibonelelo-mali somntwana okhuliswa ngomnye umntu